कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् चैत्र १४ गते बिहिबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् चैत्र १४ गते बिहिबारको राशिफल !
प्रकाशित : बुधबार, चैत १३, २०७५१७:१४ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७५ साल चैत १४ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१९ मार्च २८ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ चिल्लागा। चैत्र कृष्णपक्ष। तिथि– अष्टमी, २५:४१ बजेउप्रान्त नवमी। नक्षत्र– मूल, १३:३४ बजेउप्रान्त पूर्वाषाढा। योग– वरियान्, १९:४९ बजेउप्रान्त परिघ। करण– वालव, १३:१० बजेदेखि कौलव, २५:४१ बजेउप्रान्त तैतिल। आनन्दादिमा धुम्र योग। चन्द्रराशि– धनु। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:०२ बजे, सूर्यास्त– १८:१८ बजे र दिनमान ३० घडी ४२ पला। अष्टमी व्रत। गोरखकाली पूजा। शीतलाष्टमी। बासेरा।
तपाइँको दिन मिश्र फलदायी रहनेछ । आज तपाइँलाई अस्वस्थता र निराशताको अनुभव हुनेछ । शारिरीमा थकान र आलाश्य एवम् मनमा अशान्तीको अनुभूति हुनेछ । क्रोधित रहँदा कम बिग्रन सक्दछ । व्यवहारमा न्यायपूर्णता ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् । निर्धारित कार्य गर्नको लागी प्रयासरत रहनु होला । धार्मिक यात्राको आयोजना हुनेछ ।
आजको दिन सावधानी पूर्वक बिताउनु होला । कुनै पनि प्रकारको नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु होला । तपाइँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ । खान-पानमा विशेष ध्यान दिनु हितकारी हुनेछ । शारीरिक रुपबाट थकान र मानसिक रुपबाट विकर्षणको अनुभव गर्नु हुनेछ । कार्यालयमा कार्यभारको कारण अधिक थकानको अनुभव हुनेछ । प्रवास लाभदायी रहँदैन । सम्भवत : आध्यात्मिकताको लागी केहि समय निकाल्नु होला ।
तपाइँको दिन आनन्द-प्रमोद तथा सुखानुभावमा बित्नेछ । विपरित लिंगीय व्यक्तिहरुसंग भेट हुनेछ । मित्र तथा प्रिय पात्रको साथ मनोरंजनपूर्ण प्रवास हुन सक्दछ । वहान सुख मिल्नेछ । नयाँ वस्त्रको किनमेलको अवसर मिल्नेछ । प्रणयको लागी आजको दिन निकै राम्रो छ । भोजनमा मिठो खाना मिल्नेछ । उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हुनेछ । सामाजिक सम्मान र ख्याती मिल्नेछ ।
दिन राम्रो बित्नेछ । घरमा शान्ती तथा आनन्दको वातावरण रहनेछ । सुखमय प्रसङ्ग बन्नेछ । तपाइँले गर्नु हरेक कार्यमा यश प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । घरमा परिवारजनको साथ हर्षोल्लासमा समय बित्नेछ । नोकरी पेशा गर्ने व्यक्तिलाई नोकरीमा लाभ हुनेछ । आफ्नो निम्न सहकर्मीबाट लाभ हुनेछ । स्त्री मित्र संग भएको भेटले मन प्रशन्न रहनेछ । शत्रु माथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
आजको दिन आनन्दसंग बित्नेछ । आज तपाइँ अधिक कल्पनाशील ब अन्नु हुनेछ । साहित्य-सृजनामा मौलिक रुपले काव्य रचनाको प्रेरणा मिल्नेछ । विद्यार्थीहरुको अभ्यासको लागी निकै राम्रो समय छ । प्रियतमको साथ भएको भेट शुभ फलदायी हुनेछ । परिणाम स्वरुप दिनभर मन प्रशन्न रहनेछ । सन्तानको प्रगतीको समाचार मिल्नेछ । मित्रको साथ मिलन हुनेछ । स्त्री मित्रबाट लाभ हुनेछ ।
आजको दिन तपाइँको लागी खासै राम्रो छैन । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रनेछ । निकै तनावको कारण मन निराश रहनेछ । स्फूर्तिको अभाव रहनेछ । स्वजनको साथ मनमुटाव हुनेछ । माताको स्वास्थ्यको चिन्ताले सताउनेछ । स्त्री र पानीबाट हानी हुने डर छ । मानिसको सामु अपमान नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला ।
तपाइँको दिन शुभ फलदायी रहनेछ । बन्धुको साथ राम्रो सम्बन्ध रहनेछ तथा उनिहरुको साथ बसेर घरको प्रसङ्गको चर्चा हुनेछ । कुनै पनि धर्मित स्थलमा जाने सफल आयोजना हुनेछ । धन लाभको योग छ । विदेशबाट राम्रो समाचार आउनेछ । व्यवहारिक प्रसङ्गको कारण यात्रा गर्न सक्नु हुनेछ । नयाँ कार्यको आरम्भको लागी शुभ दिन रहेको छ । शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहनु हुनेछ । आजको दिन भाग्यव्रिद्धिको दिन रहेको छ ।
आज साधारण लाभको दिन रहेको छ । व्यर्थको खर्चमा रोक लगाउनु होला । परिवारमा झगडा नहोस् यसको राम्रो ध्यान राख्नु होला । कुटुम्बका सदस्य बीच मनमुटावबाट बच्नु होला । शारीरिक समस्याको साथ मनमा ग्लानी रहनेछ । नकारात्मक मानसिकता नराख्नु होला । अनैतिक प्रविर्तिबाट टाढा रेअहनु होला । विद्यार्थीहरुको विध्योपार्जनमा अवरोध आउनेछ ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ध्यान राख्नु होला । आज तपाइँ निर्धारित कार्य गर्न सक्नु हुनेछ । आर्थिक लाभको प्राप्ती हुनेछ । प्रवासको विशेष गरेर धार्मिक यात्राको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । दाम्पत्य जिवनमा सुख र आनन्द मिल्नेछ । आज तपाइँको व्यवहार सामान्य रहनेछ । रुचिकर भोजन मिल्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा यश-किर्तिमा वृद्धि हुनेछ ।
आजको दिन सावधानी पूर्वक रहनु होला । आज व्यवसायिक कार्यमा सहकारी हस्तक्षेप बढ्नेछ । खर्च सामान्य देखि अधिक रहनेछ । धार्मिक, सामाजिक कार्यमा व्यस्तता बढ्नेछ तथा खर्च पनि हुन सक्दछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता रहनेछ । पुत्र एवम् नातेदारको साथ मनमुटाव हुन सक्दछ । अधिक परिश्रम गर्दा सफलता मिल्नेछ । मानसिक तनावको अनुभव हुनेछ । दुर्घटनाबाट सम्हालिएर रहनु होला ।
नयाँ कार्यको आयोजनाको प्रारम्भ गर्नको लागी आजको दिन शुभ रहनेछ । नोकरी तथा व्यापारमा लाभ हुने सम्भावना छ । स्त्री मित्रसंग कार्य मिलन सक्दछ । लक्ष्मी देवीको कृपादृष्टि तपाइँ माथि रहनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा तपाइँको ख्याती बढ्नेछ । सन्तानको साथ राम्रो मेल रहनेछ । पत्नी त पुत्रबाट आनन्दको समाचार मिल्नेछ । विवाह इच्छुक मानिसको लागी विवाहको संयोग बन्नेछ ।
तपाइँको आजको दिन अत्यन्त शुभ फलदायी रहनेछ । आज तपाइँको लागी कार्यसफलता र शिर्ष पदाधिकारीहरुको कृपा दृष्टिको कारण प्रशन्नता पूर्ण दिन रहनेछ । व्यापारमा वृद्धि तथा सफलता मिल्नेछ । पिता तथा ठुला-बडाहरु बाट लाभ हुनेछ । लक्ष्मी देवीको कृपा रहनेछ । कुटुम्बमा आनन्दको वातावरण बन्नेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । सरकारको तर्फबाट लाभ हुनेछ । मान-सम्मान तथा पदोन्नतिको सम्भावना रहेको छ । संसारिक जिवन आनन्दमय रहनेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेष्ठ १० गते शुक्रबारको राशिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक ०१ गतेको राशिफल